सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ
आजका अतिथि सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ
कोशी अञ्चलको तेह्रथुममा १९९९ सालमा जन्मिएका सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर हुन् । २०२४ सालमा राष्ट्र बैङ्क प्रवेश गरी अधिकृत, मुख्य आर्थिक सल्लाहकार र डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म भएका उनले सोही कार्यकालमा अमेरिकाको वासिङटनस्थित अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा आर्थिक सल्लाहकारको पदसमेत सम्हालेका थिए । विगत ८ वर्षदेखि नबिल बैङ्कका अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ ५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार रहेका थिए ।
वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, आर्थिक विकास र तरलता सङ्कट
१९९० को दशकबाट शुरू भएको आर्थिक क्षेत्रको उदारीकरणपछि वित्तीय क्षेत्रमा शुरू भएको निजी लगानीले व्यापकता मात्र पाएन । वित्तीय क्षेत्रको सुधार र विस्तारले निरन्तर गति लिँदै गयो र त्यो प्रक्रिया हालसम्म पनि कायम नै रहेको छ । यसबीच अथवा भनौं विगत दुइ दशक अवधिमा वित्तीय क्षेत्रले गर्न सकेको प्रगति र विकासमा पुर्याएको योगदानको समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
दुइ दशकअघि पाँच वाणिज्य बैङ्क र दुइ विकास बैङ्कबाट सेवा प्रदान भइरहेकोमा आज ३० वाणिज्य बैङ्क, ८० विकास बैङ्क, ८५ वित्त कम्पनी र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने सङ्घसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाले देशको ७५ ओटै जिल्लामा वित्तीय सेवा पुर्याइरहेका छन् । दुइ दशकअघि वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल निक्षेप रू. २२ अर्ब ४७ करोड रहेकोमा आज यसमा वृद्धि भई रू. ६ सय २६ अर्ब पुगेको छ । त्यसैगरी ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेपलाई समेत जोड्दा देशको कुल लगानीयोग्य साधन रू. ७ सय ६५ अर्ब पुग्न जान्छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ६४ दशमलव ६ प्रतिशत हो । दुइ दशकअघि यस्तो साधन सो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।
यसैगरी कर्जातर्फदुइ दशकअघि वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल कर्जा रू. १८ अर्ब ९२ करोड थियो । आज आएर यसमा पनि वृद्धि भई कुल कर्जा रू. ५ सय ९२ अर्ब पुगेको छ । यसमा ‘ख’ र ‘ग’ समूहका विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूले प्रदान गरेका कर्जासमेत जोड्दा रू. ७ सय २६ अर्ब पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६१ दशमलव ४ प्रतिशत हो । दुइ दशकअघि कुल कर्जा सो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र थियो । दुइ दशकअघि कुल कर्जामध्ये उत्पादक क्षेत्रतर्फप्रवाहित हुने कर्जा २८ प्रतिशतसम्म हुने गरेकोमा यो अहिले आएर ५० प्रतिशतमाथि रहेको छ । आजको स्थितिमा रू. ३० देखि ४० अर्बसम्मका विकास आयोजनामा आफ्नै आन्तरिक साधनस्रोतबाट बैङ्कहरू मिलेर सामूहिक रूपमा कर्जा गर्न सक्षम देखिएका छन् ।
यसप्रकार वित्तीय क्षेत्रको विकासले लामो फड्को मारिसकेको छ । तर, वित्तीय क्षेत्रसँग रहेको देशको यो साधन प्रत्यक्ष लगानीद्वारा आयवृद्धि गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेतर्फप्रवाहित र उपयोग गर्ने वातावरण देशमा देखिएको छैन । द्वन्द्वको लामो अवधि र त्यसपछि सृजना भएको राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खलाले गर्दा देश गतिविहीन अवस्थामा पुगेको छ । देशमा आएको सामाजिक परिवर्तनले आमरूपमा जनस्तरमा राजनीतिक चेजनाको स्तरमा वृद्धि भएको छ । मनिसहरूको आकाङ्क्षा त्यसैअनुरूप बढेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व ती आकाङ्क्षालाई समेटेर लैजान असक्षम हुँदै गएको अवस्थाले विस्तारै जनआक्रोशको सृजना गर्दै छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको छ । यस अवस्थाले भोलिका दिनमा विस्फोटक स्थिति सृजना हुन सक्ने सङ्केत दिँदै छ । यो दीर्घकालमा राम्रका लागि पनि हुन सक्छ । तर, परिवर्तनको यो चाहनाले गलत दिशा पनि लिन सक्छ भन्ने कुरा विभिन्न देशको इतिहासले देखाएको छ ।
उपरोक्त पङ्क्तिहरूमा देखिएका वित्तीय क्षेत्रको विकासले देशको आर्थिक विकासका लागि परिचालित वित्तीय साधनको अवस्थालाई दर्शाउँछ । तर, साधनको उपयोग आर्थिक विकासका लागि हुन नसकेमा भोलिका दिनमा यसको उपयोग अनुत्पादक कार्यतर्फ हुन सक्नेछ । उत्पादक लगानी वातावरणको अभावमा घरजग्गा तथा सवारीसाधन, त्यस्तै उपभोगतर्फ आकर्षित भएको कर्जा यसको उदाहरण हो, जसले गर्दा देश र संस्थाले उपयुक्त प्रतिफल पाउन नसकी संस्थाहरूको अवस्थामा नै प्रतिकूल असर पुग्न सक्नेछ । यस अवस्थाबाट सचेत भई वित्तीय क्षेत्रको यो विस्तारबाट पूर्ण लाभ लिनेतर्फ दीर्घकालीन सोच बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तारलाई निरन्तरता दिनु पनि आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा भर्नुपर्दा उदारीकरणको अनुकूल असरको फलस्वरूप भएको वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तारलाई नकार्न सकिँदैन । तर, उद्देश्य स्पष्ट नभई अनेक वहानामा उदारीकरणको दिशालाई आवश्यक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने विषयमा नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा देखिएको तरलता सङ्कटबारे पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यो अवस्था कायम रहेमा पनि आगामी दिनमा यसले पार्न सक्ने प्रतिकूल असरले गर्दा लगातारको ब्याजदर वृद्धिले अर्थव्यवस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पारेर उत्पादन वृद्धिमा ह्रास आउन सक्नेछ भने समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई समेत अप्ठयारो बनाएर विस्तारलाई रोक्न सक्नेछ । यो दुवै अवस्था वर्तमानमा उपयुक्त होइन ।
अझ भन्नुपर्दा सरकार आफ्नो कारणले गर्दा तरलता सङ्कट बढेको स्थिति झनै स्वीकार्य हुन सक्दैन । एकातिर वाणिज्य बैङ्कहरूमा निक्षेपको स्तर असारको भन्दा बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा निक्षेपलाई न्यूनस्तरमा भए पनि कायम राख्न वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धा भई ब्याजदर वृद्धि भइरहेको छ भने सरकार जनतालाई तर्साउँदै खर्च गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेर बैङ्कको ढुकुटीमा जम्मा गरी राखेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकी ढुकुटीमा राखेको राजस्व रकम रू. २९ अर्ब पुगिसकेको अवस्था छ । खर्च गर्न नसक्ने गरी राजस्व जम्मा गरेर ढुकुटीमा राख्नुभन्दा अर्थव्यवस्थमा क्रियाशील रूपमा रहेको तरलता आज बढी उत्पादन हुन सक्ने यर्थाथलाई नेतृत्व वर्गले आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । रू. २९ अर्ब ढुकुटीमा राखी दातृनियकाहरूलाई विकासमा सहयोग गर भनी कसरी भन्ने ? यो विषय पनि सोचनीय छ ।
तरलता समस्याको कुरा गर्दा बैङ्कबाहिर तरलरूपमा रहेको विचारणीय छ । लामो अवधिको छाडापनले ठूलो परिणामको रकम औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर छ । अहिलेसम्म यो अन्य देशहरूमा जस्तो समानान्तर अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्न सङ्गठित भइसकेको छैन । तर, यो सङ्गठित भएमा यसले पार्न सक्ने असर निकै ठूलो हुन सक्नेछ । त्यसैले अहिले नै यस विषयमा व्यावहारिक सोच बनाएर त्यस्ता रकमलाई औपचारिक माध्यम बनाउन जरुरी छ । अन्य देशहरूले यसबाट मुक्ति पाउन अपनाउँदै आएको कदमलाई अनुभवका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो कदम देशको प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू जलस्रोतको विकास, लघुकर्जा, निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादनलगायत स्रोत नहेरिने र निश्चित अवधिभित्र स्रोत नखुलेको रकममा १० प्रतिशतसम्म कर सरकारलाई बुझाएर कुनै कार्यमा लगाउन सकिनेजस्ता उपाय लागू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले गर्दा पनि घरघरमा राखिएका यस्ता रकम बैङ्कमा जम्मा भई तरलताको स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा आज वित्तीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा बढी चुस्त, दुरुस्त र जिम्मेवार देखिएको छ । त्यससँगै यसले परिचालन गरेका साधनलाई वाञ्छित दिशा प्रदान गरी यसलाई आर्थिक विकास उद्देश्य हासिल गर्न उपयोग गर्ने सक्षम राजनीतिक नेतृत्व छ ।